Hoggaamiyayaasha G7 oo ka hadlay shaqaaleynta qasabka ah, halista Internet-ka iyo musuq-maasuqa
Madaxweyne Joe Biden iyo hoggaamiyaal kale oo ka mid ah Kooxda dimocraadiyiinta kooxda G7 ayaa waxa ay cadeeyeen sida ay uga go’antahay inay wax ka qabtaan howlaha Qasabka ah ee shirkadaha ganacsiga aduunka ee isku xiran, Khataraha madaxfurashada iyo Musuqmaasuqa.
Mareykanka iyo saaxiibaddiisa kale ee dalalka dunida laysku yiraahdo G7, waxaa ay wali si weyn uga walwalsanyhiin adeegsiga noocyada shaqada khaasab ah ee ay abuuraan shirkadaha isku xiran ee caalamiga ah, kuwaasoo ay ku jiraan kuwa dowlada ay maalgaliyaan ee lagu khasbo shaqaalaha nugul, sida Ughurts iyo qowmayadaha kale iyo kooxaha diinta laga tirade badanyahay ee Xingiang.
Beeraha, tamarta, iyo daabaca dharka ayaa ah waxaa keenayo wacaala ugu ee shaqooyinka khasabka ah ee gobolka Xinjing. Hogaaamiyaashu waxey isla garteen muhiimada ay leedahaya in la ilaaliyo xuquuqda Aadanaha. Waxaa sidoo kale ka go’an in isha si gaar ah loogu hayo shabakadaha isku xiran ee dambiilayaasha.
Waxaa jirtey faragalin ballaaran oo xagga Internet-ka ah oo saameyey dalal badan oo ka mid ah G7 iyo waddammada kale ee haysto waxsoo saarka shirkadaha, elektarooniga, warshadahooda, iyo Isbitaaladda. Weeraradda xagga internet ee isaga gudba dalalka waxey bartilmaameesadaan aduunka oo dhan oo dhibaato ku hayaan. Shirkadaha gaar ka loo leeyahay iyo dowladaha na waa inay meel uga soo wada jeestaan si loo hubiyo in Kaabayaasha muhiim ah laga badbaadiyo khatartooda.
Waxa intaasi dheer, ficilada xaasidnimada leh ee Internet waa in si dhow loo baaraa oo la maxkamadeeyaa, sidoo kalena loo helaa difaac guud oo xagga internet ah oo la dhiso. Shaqsiyaadka iyo dowladaha waa inay ka hadlaan falal-dambiyadeeda agtooda ka dhacayo.
G7, waxaa sidoo kale ay isku raaceen in la qaado talaabo wada jir ah oo lagula dagaalamayo Musuqmaasuqa. Madaxweyne Biden ayaa waxuu ku dhowaantan shaaca ka qaadey in dadaaaladda looga hortagayo musqmaasuqa ay yhiin danta amniga qaranka Mareykanka mid ku xiran, waxuuna soo saaray qorshe ku saabsan la dagaallanka Musuqmaasuqa si kor loogu qaado shaqadan muhiim ah.
Musuqmaasuqa ayaa waxaa lagu sheegay warbixintan inuu ragaad galiyey kalsoonidii shacabka, waxeyna dowlada ka dhigaysaa ayaa la yiri mid aan waxtar lahayn; waxaa sidoo kale ay lagu lunsadaa hadntida dadweynaha, waxuuna dumiyaa aasaaska bulshooyinka dimuqoraadiga ah. Faaladan waxa kaloo lagu sheegay in Musuqmaasuqa oo ah mid dhaqaalo badan lagu lunsado uu cadaalad daro uu ku yahay muwaadiinta.
Ayadoo Mareykanka uu la kaashanayo dhigiisa dalalka ah G7, waxuu kaloo wax ka qaban doonaa adeegsiga khaldan ee shirkaddaha Shell, waxuuna xaddidi doonaa awoodaha ay dadka xun u isticmaali karaan lacagaha faraha badan ee ay galiyaan guryaha la gato.
Mareykanka waxaa uu soo dhoweynayaa ballanqaadka G7 ee ah in inuu qaado tillaabo wax ku ool ah oo lagula dagaalamayo musuqmaasuqa.
Madaxweyne Biden sida uu sheegay “Mareykanka waxuu kusoo laabanayaa ganacsigii hoggaaaminta aduunka isagoo barbartaagan saaxiibaddaiisa kale caalamka ee ay wadaagaan danaha guud..